War-saxaafadeed Xuska Maalinta Nabada – Nagaad
HomenewsNews & EventsWar-saxaafadeed Xuska Maalinta Nabada
Haweenka JSL oo ay isku-xidhka Nagaad hormuud u tahay waxay ka soo qayb qaateen shirarkii dib-u-nabadaynta Somaliland iyo hirgalinta xasiloonida dalka iyaga oo tiir-dhexaad u ahaa shirarkii dib-udhiska ee Somaliland, ilaa iyo haddana waxa ay ka qayb qaataan nabadaynta iyo adkaynta amniga.
Xuska maalinta nabadda aawadeed, Isku-xidhka Haweenka Somaliland ee Nagaad waxa ay haweenka ugu baaqaysaa inay ka qayb qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida kana shaqeeyaan sidii dadka reer Somaliland ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo xasiloonni, sidoo kalena ay ka qaybqaataan dadaalada nabadeynta.
Si nabadda iyo xasiloonidu u taam noqoto, waxa laga maarmaan ah in laga wada qaybqaato talada dalka, haweenkuna door muhiim ah ku yeeshaan jaangoynta majaraha dalka JSL. Haweenka reer Somalialnd waxaanu ugu baaqaynaa inay ka qaybqaataan geedisocodka dimuqraadiyadda Somaliland iyo doorashooyinka.
Ilaalinta nabaddu iyo xasilinteedu waa masuuliyad saaran qof kasta oo muwaadin reer Somaliland ah; dawladda, odayaasha dhaqanka, culimo-awdiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo dhalinyaradaba oo looga baahan yahay inay si mug leh uga qayb qaataan nabaddaynta iyo daminta colaadaha ka taagan deegaanada Ceel-Afweyn.
Isku-xidhka Haweenka ee Nagaad waxay haween-waynaha Somalailand ku boorinayasaa in ay ka qaybqaataan nabadaynta iyo adkaynta nabadda, sida aynnu ogsoonahay saamaynta ugu badan ee collaadduhu waxay ku dhacaan haweenka iyo maatida, sidaa darteed waxaanu baaq balaadhan u diraynaa haween-waynaha reer Somaliland inay si mugleh uga qayb qaataan daminta colaadda mar walba kasoo cusboonaanaysa deegaanada Ceel-Afweyn.
Marwo Asmahaan Cabdisalaan,